( လွမ်းသူ့ ပုံပြင် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( လွမ်းသူ့ ပုံပြင် )	8
( လွမ်းသူ့ ပုံပြင် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Feb 28, 2015 in Creative Writing, Poetry | 8 comments
သြော် အလွမ်း အလွမ်း
မြစပဲရိုး says: အော
ဇာတ်လမ်း က စပြီ ဆိုတာ နဲ့ …
ကြည့် … အရီး ပြောတာ မမှားပါဘူး မောင်စော ရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ..အစ်ကို…အလွမ်းနဲ့စရသလားဗျ…တယ်လေ..ဒီအချိန်ဆို ပရောဂျက်တခုအစပြုတဲ့အချိန်…တက်ကြွလန်းဆန်းနေရမှာဗျ…အရီးရေ… ကြည့်နေပါဗျ…မင်္ဂလာပွဲဖြစ်မှ သတို့သားအရံနေရာက မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးပြအုံးမယ်…အဟိဟိ
တောင်ပေါ်သား says: နုထွားရယ်
တိုက်ပွဲအတွက် ပစ်မှတ် မတွေ့သေးဘူး ၊
လက်နက် အသင့် ၊ ဗျူဟာ ၃ မျိုး အသင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဦးနွေဦးရေ
ဒီမယ်ဗျို့ ဘာပြောမလို့ရယ်မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဒီနေ့ ဗျူဟာ စ ပလားး
အလွမ်းနဲ့ စ သလား
Alinsett@Maung Thura says: ဤနေ့သည်ကား…..
အလွမ်းတွေ အပြိုင်းအရိုင်းပွင့်သော နေ့တစ်နေ့သာ ဖြစ်ပေသည်…
Courage says: ကိုစောမောင် တစ်ယောက် လွမ်းနေပါတယ် လွမ်းရယ်… …. … လွမ်းတတ်လိုက်တာ ဦးဦးတောင်ပေါ်သားရယ်။ FB သုံးခွင့်လေးတော့ ပြုနော့ (လေးစားစွာဖြင့်)
naywoon ni says: အချစ်​ဗျူဟာ စရင်​ လွမ်းတဲ့ အ​ကြောင်း ​ယောင်​လို့ ​တောင်​မ​တွေး ရဖူးဗျ ။ သီချင်းနား​ထောင်​ရင်​​တောင်​
” အမုန်းသံကြားရင်​ ဖျားချင်​လို့ အသက်​တို့ လိမ့်​မယ်​ ချစ်​သူ​ရေ့ မမုန်းလိုက်​နဲ့ ​နော်​ ” ဆိုတာမျိုး ​ရွေးနား​ထောင်​ရတယ်​ ။ လွမ်းတဲ့ ​ဆွေးတဲ့ အ​ကြောင်း ​ပြောတဲ့ သူပါ​ရှောင်​ဗျာ ။ အဲ့ဒါ​တွေက လူကိုထိုင်းမှိုင်း​စေတယ်​ ။ အချစ်​ရှာပုံ​တော်​ဖွင့်​မဲ့ သူက အရာရာ ဖလက်​ရှ်​ ဖြစ်​​အောင်​​နေရတယ်​ ဗျ . ။ ​ကျော်​ဆိုလိုတာက ဖလန်းဖလန်း ထ​နေဖို့ မဟုတ်​ဘူး ။ အိ​နြေ္ဒ​ယေ ရရ တက်​ကြွလန်းဆန်း​နေဖို့ ​ပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.